Conhost သည်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးလား။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > Conhost.exe မျိုးစုံသာဓက - ပြည့်စုံကိုကိုးကား
Conhost.exe မျိုးစုံသာဓက - ပြည့်စုံကိုကိုးကား
conhost Is။ဗိုင်းရပ်စ် EXE? မဟုတ်ဘူးအဲဒါမဟုတ်ဘူး။ အမှန်တရားအိမ်ရှင်။exeဖိုင်သည် 'Console Window Host' ဟုခေါ်သောလုံခြုံသော Microsoft Windows စနစ်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၏စာရေးဆရာများmalwareကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, worms နှင့် Trojans များသည်သူတို့၏ဖြစ်စဉ်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ဖိုင်အမည်တူကိုတမင်တကာပေးသည်။
Conhost EXE ကဘာလုပ်သလဲ။
အိမ်ရှင်။exe is ဖြစ်ပါတယ်Windows Explorer ကိုအတူအလုပ် Command Prompt ကိုခွင့်ပြုရန်ပြေးဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များတစ်ခုမှာဟုတ်တယ်၎င်းသည်ဖိုင်များ / ဖိုင်တွဲများကို Command Prompt သို့ drag and drop လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။ အကယ်၍ third party များသည် command line ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါက၎င်းတို့သည်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်အိမ်ရှင်။exe။
ငါ Conhost EXE ကိုသတ်နိုင်ပါသလား?
သင်စဉ်းစားလိမ့်မယ်killအဆိုပါပိတ်ဖို့ရန်လုပ်ငန်းစဉ်လှုပ်ရှားမှုအိမ်ရှင်။exe။ မင်းလုပ်နိုင်အဆိုပါဖြစ်စဉ်များထို့နောက် Getသတ်ပစ်'အိမ်ရှင်။exeသင်တစ် ဦး ForEach အသုံးပြုခြင်းသတ်ပစ်လုပ်ငန်းများကိုအကြားအတွက်သာဓကအပေါငျးတို့သ။၂၉ ဇန်နဝါရီ 2018
ယောက်ျားတွေဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ ဒီမှာငါ့ကို Mehedi Shakeel ပါ။ ဒီနေ့သင် sstec tutorial တွေကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျယောက်ျားတွေကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး command ကိုနာမကိုအမှီ cipher.cipher နှင့်အတူတစ်ဦး encryption ကိုများနှင့်စာဝှက်ဖြည် command တစ်ခုဖြစ်သည်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ command ကိုစာရင်းတွင်ယောက်ျားတွေဒါရဲ့စတင်ရန်ပါစေဘို့ Soguys ယနေ့ဤဆောင်းပါး၌ငါအလွန်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသုံးခုအဓိကက Windows command များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဟောပြောပွဲသွားပါ၏ ဒီ encryption ကိုသင်တိုင်းဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါကိုစာဝှက်ပေးနိုင်တဲ့မှာထား၏။
မည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆိုစာဝှက်ရန် cipher command ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြပါရစေ။ ကောင်းပြီ။ ပထမဆုံးပြုလုပ်ရန်မှာဖွင့်ရန် command prompt သို့မဟုတ် cmd ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် Start menu ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီမှာအမျိုးအစား cmd.and အဆိုပါ cmd ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းကိုဖွင့ ်၍ ဖွင့်နိုင်သည်။ Windows + R key ကိုနှိပ်ပြီး cmd ကို run ပါ။ ယောက်ျားတွေ၊ ရိုးရိုးစာသားဖိုင်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့နိုင်ဘူး။
၎င်းကိုကူးယူပါကသို့မဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာသို့ပြောင်းရွှေ့ပါကယခုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ယခုဤဖိုင်စာဝှက်သင်ကျနော်တို့အနေနဲ့ရှာဖွေသူအသုံးပြုတဲ့အခါဖိုင်ကို encrypted.now ဖြစ်ပါတယ်တွေ့မြင်နိုင်သည် enter.now link.then file secure မှ encryption ကိုအသုံးပြုပါ။
ဤဖိုင်တွင်သော့ခတ်ထားသောအိုင်ကွန်ရှိသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာယခုစာဝှက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖိုင်ကို decrypt လုပ်ရန် dasheကို d.dfor decryption ဖြင့်အစားထိုးပါ။
Enter ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါဖိုင်ပြီးရင်ယောက်ျားတွေစာဝှက်ဖြည်ထားတဲ့လိမ့်မည်။
ယခုတွင်တွင် FC command.fc သည်ဖိုင်နှိုင်းယှဉ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ဒီ command ဖြင့်ဖိုင် (၂) ခုသို့မဟုတ်ဖိုင်များစွာကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ yourwindows cmd သုံးပြီး။
ယခုဖိုင်ကိုမည်သို့နှိုင်းယှဉ်မည်ကိုလေ့လာလိမ့်မည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောစာသားဖိုင်နှစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ နှစ် ဦး စလုံးအချည်းနှီးဖြစ်ကြ၏။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် FC အသင်း Command ဖြင့်ထိုဖိုင်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။ နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ terminal ကိုပေါ်ရသောအရာကို output ကိုကြည့်ပါ။
FC ကိုရိုက်ထည့်ပါ, ထို့နောက်အာကာသဖိုင်တစျခု, ပြီးတော့အာကာသဖိုင်နှစ်ခု။ Enter ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုသင်သည်ဤဖိုင်ပါအကြောင်းအရာများကိုကွဲပြားခြားနားမှုမရှိကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ok ယခုရဲ့အဲဒီနှစျခုကစာသားဖိုင်အခြားစကားလုံးသို့မဟုတ်စာသားထားကြကုန်အံ့။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုထပ်တူ command နှင့်ထပ်မံနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ယခုသင်ဒီမှာကဤဖိုင်များကိုအကြားခြားနားချက်များကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
အခုနံပါတ် ၃ မှာ tasklist နဲ့ taskkill command ကိုတွေ့ပြီ။ tasklist command သည်သင်၏ cmd ရှိသင့် windows windows ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသောဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows ကွန်ပျူတာရှိ Task kill manager သို့မဟုတ် task manager ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။
သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်မှမည်သည့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ငန်းကိုမဆိုသတ်ပစ်ရန် Task kill command ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီ command တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲကြည့်ရအောင်။ သင် Task Manager ကိုဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာလည်ပတ်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
အဆိုပါရန် Do List ကိုကျနော်တို့ CLI mode မှာသို့မဟုတ် Prompt ကိုစစ်ဌာနချုပ်အနေဖြင့်တူညီသောအရာလုပျနိုငျမှာထား၏နှင့်အတူ, ရုံရန် Do စာရင်းထဲတွင်ရိုက် Enter နှိပ်ပါ။ သင့်အနေ cmd ပေါ်တပြင်လုံးကိုပြေးဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ယခု taskkillcommand ကို အသုံးပြု၍ task manager ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသတ်ပစ်ရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ရန်လုပ်ပါ။
Task kill space dashfကိုရိုက်ပြီး space dash PID ဟုရိုက်ထည့်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ process ID နှင့် process ID နံပါတ်ဖြစ်သည်။ Enter ကိုနှိပ်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကလူတွေကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။ ဒါကဒီနေ့အတွက်ပဲ။ ဒီဆောင်းပါးကိုသင်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
သင်ဤဆောင်းပါးနှင့်ဤဆောင်းပါးကိုသင်အမှန်တကယ်ကြိုက်ပါက၎င်းကိုလက်မကြီးကြီးပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ရုပ်သံလိုင်း၌အသစ်ဖြစ်နေလျှင်ကျွန်ုပ်၏ယူကျု့ချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းပါ။ နောက်ဆုံးဆောင်းပါးသင်ခန်းစာများအတွက်ခေါင်းလောင်းအမှတ်အသားကိုနှိပ်ပါ။ ငါ Mehedi Shakeel ပါ။ သင် sstec tutorial ကိုကြည့်ပြီးထွက်လိုက်သည်။
သတိပြုရန်မှာဤအရာသည်လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည် virtual machine များစွာနှင့်ကွန်ပျူတာပရိုဖိုင်းအချို့ကိုစာရင်းပြုစုထားကြောင်းသတိပြုပါ။ Satellite တွင်အသေးစား၊ အလတ်စားနှင့်ကြီးမားသောတွက်ချက်မှုပရိုဖိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ attribute တွေကို configure လုပ်ရမယ် host host ကိုကြည့်ပါ။ ဤသည်မှာသင်အသုံးပြုသောမည်သည့်ဖြန့်ကျက်မှုနည်းလမ်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
Host group တစ်ခုကယေဘုယျအားဖြင့် system group တစ်ခုကိုဘယ်လို configure လုပ်မလဲဆိုတာသတ်မှတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ host တစ်ခုချထားလိုက်သောအခါ host group သည် RHEL7 Crash ကိုငါရွေးချယ်မည့် host group ၏ setting ပေါ် မူတည်၍ settings များစွာကိုအလိုအလျောက်ပြီးစီးအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။ B. အကြောင်းအရာအရင်းအမြစ်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဂြိုဟ်တုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆေးတောင့်ဆာဗာကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုမည်သို့ချထားသည်ဤကိစ္စတွင်, libvirt ။ သင့်ရဲ့ standard computing profile တစ်ခုက host တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးသလို၊
အိမ်ရှင်။ အိမ်ရှင်ဖန်တီးပါ။ ကျနော်တို့နာမည်တစ်ခုပေးပါ။
ဒါကြောင့်ငါ့အဖွဲ့အစည်း၊ ငါ့တည်နေရာ၊ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့အိမ်ရှင်အဖွဲ့ကိုရွေးပါ။ အခြားနယ်ပယ်အားလုံးသည်ဤ host group မှအမွေဆက်ခံရသည်ကိုသင်သတိပြုသင့်သည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ကျနော်တို့လိုလျှင် default settings ကိုအချို့ပြောင်းလဲသွားပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဒါဟာမလိုအပ်ပါဘူးနိုင်ပါတယ်။
'Submit' ကိုမနှိပ်မီကျွန်ုပ်၏ libvirt ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်သည်။ သင်သည် hostnames စာရင်းကိုကြည့်ပါကဤ host သည်လက်ရှိတည်ရှိနေခြင်းမရှိကြောင်းသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ 'Always on Top' ကိုရွေးပြီးကျွန်ုပ်၏ Satellite UI သို့ပြန်သွားပါ။
hostvir နာမည်ကို libvirt မျက်နှာပြင်တွင်ပြသခဲ့သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဒီ host အသစ်ကို console ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ host ကအားစိုက်ထုတ်မှုအနည်းငယ်သာပေးတာကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဤသည်ဒါရဲ့နောက်ခံ၌ဤ run ပြန်ကဖို့လာကြကုန်အံ့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုက Talk to Discovery ကိုစီစဉ်ပေးချင်တာပါ။ ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိနိုင်သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ရှင်းလင်းသောသတ္တုသည့်စနစ်ရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်သင် VM ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအတွက် VMs အားနှင့် Linux ကိုစီမံခနျ့ခှဲရုံအသုံးချနှင့်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများဖန်တီးဘယ်မှာတာဝန်တစ်ခုခွဲခြာရှိသည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤကိစ္စများတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို manually သို့မဟုတ်အလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဒီနေ့သရုပ်ပြခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်သည် virtual စက်များကို libvirt တွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ငါပြေးတော့မယ့်အရာတွေကိုဖန်တီးပြီးသားပါ။ ဂြိုလ်တုတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ဖုံးအုပ်ထားပြီးဖြစ်သောအုပ်စုများအပြင်ဂြိုဟ်တု၌ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလည်းရှိသည်။ သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောအိမ်ရှင်များ၏အချက်အလက်အချက်အလက်များနှင့်၎င်းတို့အားမည်သို့ထောက်ပံ့ပေးသည်ကိုခွဲခြားရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည် host များအား hypervisor အနေဖြင့်အလိုအလျောက်ထောက်ပံ့ပေးလိုသည်။ သို့မဟုတ်သင်ဒေတာဘေ့စဆာဗာများအဖြစ်အကြီးစား hard drive တွေနှင့်အတူအိမ်ရှင်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ချင်တယ်။
ကျနော်တို့ '' Configure ',' Discovery စည်းကမ်းများ '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အခန်းကဏ္ created ဖန်တီးဒါကြောင့်ငါကသင်အသေးစိတ်ကိုပြသနိုင်ဖို့က select လုပ်ပါ။ ဤဥပမာတွင် BIOS ပံ့ပိုးသူနှင့်ကိုက်ညီပြီး RHEL7 crash host group သို့ host မ်ားအား BI BI ပံ့ပိုးသူနှင့် BIOS ပံ့ပိုးသူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အိုင်ပီလိပ်စာ၏နောက်ဆုံးရှစ်လုံးတွဲကို အခြေခံ၍ host ကိုကျွန်ုပ်တို့အမည်ပေးသည်။ ငါ 'အုပ်ချုပ်ရေးမှူး', 'Settings' နှင့် 'Detected' အောက်တွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပယ်ဖျက်ရုံမျှနှင့်အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုအလိုမရှိကြောင်းညွှန်ပြရန်။ အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲရှာဖွေခြင်းစည်းမျဉ်းများနှင့် operating system ကိုအလိုအလျောက်ပေး။
ဒီသရုပ်ပြများအတွက်, ငါဖြန့်ကျက်ကို manually မစတင်ချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လက်ရှိမသန်စွမ်းဖြစ်သကဲ့သို့ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီ setting ကိုထောက်ပြချင်တယ်။ ဒါဖြန့်ကျက်အဘို့, ငါ libvert ပြန်သွားပါလိမ့်မယ်ငါ VM ကဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
ငါ PXE Boot တက်, Linux RHEL7.5 ကိုရှေးခယျြသောကြောင့် RAM နဲ့ 10 Gig hard drive ကိုနှစ်ခု Gig ပေးပါ။ ဒါကြောင့်နာမည်တစ်ခုပေးပါ။
ငါ VLAN 127 ကိုအသုံးပြုတော့မယ်။ Finish ကိုရိုက်မယ်။ ဒီကိုစလိုက်တာနဲ့ငါဟာအခြား configuration ကိုပြောင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတကယ်ပိတ်သွားမှာပါ၊ ငါ NIC ကနေ boot ချင်တဲ့နေရာမှာငါရွေးမယ်။ ပထမကကွန်ယက်ကနေအနည်းဆုံးနှစ်ခါ boot လုပ်ရမယ်။ လျှောက်ထားမယ် (Mouse ကိုနှိပ်ပါ) ဒီ host ကို run ပါ။
ဒီပြတင်းပေါက်ကိုအမြဲတမ်းထိပ်ထားဖို့ငါ့ကိုခွင့်ပြုပါ၊ ဒီ menu ပေါ်လာရင် Foreman Discovery Image ကိုရွေးပေးပါ။ ထိုအခါငါက run မထိဘဲ။ (Clock is ticking) ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောင်မြင်သောစာမျက်နှာရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ Satellite သည်အိမ်ရှင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ခြေလှမ်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
သတိရပါ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုဖွင့်ထားပါကကျွန်ုပ်မပါဘဲနောက်တစ်ဆင့်သွားလိမ့်မည်။ Satellite တွင်ကျွန်ုပ်သည် 'Hosts', 'Discovered Hosts' နှင့် host သို့ သွား၍ host နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုကြည့်ရှုရန် system name ကိုညာဖက်နှိပ်နိုင်သည်။ အထက်တွင် 'ChooseaAction' အောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်း host နှင့်ကိုက်ညီရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်၏ Discovery Rules ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော Auto Provisioning option ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ host သည် supplying process ပြီးဆုံးသည်နှင့် operating system ကို configure လုပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။
ဤသည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Hosts, All Hosts စာမျက်နှာသို့သွားနိုင်သည်။ ဤ host အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်ထားသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစည်းမျဉ်းများပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပြီး IP address ၏နောက်ဆုံးရှစ်လုံးတွဲဖြစ်သော host Dash 118 ဟုခေါ်သည်။
ကျနော်တို့၏သင်တန်းနောက်ပိုင်းမှာဒီ hostname ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤတည်ဆောက်ပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်နေစဉ်တည်ဆောက်တပ်ဆင်ဆိုင်းငံ့ကြောင်းတွေ့မြင်အိမ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကသို့ငါနှိပ်လျှင်နိုင်ပါတယ်။ (Clock is ticking) ပြီးတော့သင်မြင်တဲ့အတိုင်း installation လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် OS ကို install လုပ်ရုံတင်မကဘဲအဲဒီ host group ထဲမှာငါတို့စာရင်းပြုစုထားတဲ့အခြား software အားလုံးကိုလည်းအသုံးချခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကို၎င်းအိမ်ရှင်အားဂြိုလ်တုအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ Satellite ၀ င်းဒိုးတွင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းတည်ဆောက်မှုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အတွက် configuration ရက်စွဲအထိဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ installed နိုင်အချို့သောလုံခြုံရေးအားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ငါတို့အစောပိုင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ပြသခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့ဆက်သွားပြီးစနစ်ကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သင်မှတ်မိပါကဤအပိုင်း၏အစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ခဲ့သောပထမ ဦး ဆုံးစက်ကိုပြန်ဖွင့်ချင်သည်။ RHO53 host hosting computing အရင်းအမြစ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပေးထားတယ်။ ဒါကြောင့် installation ပြီးပြီဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။
ဤအပိုင်းကိုပြန်လည်မှတ်မိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်တစ်ခုကို ဦး ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Libvert မှာ virtual machine အသစ်တစ်ခုကိုငါတို့ဖန်တီးခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာစက်အသစ်စက်စက်ရှိရာရှင်းလင်းသောသတ္တုအမျိုးအစားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒီကိစ္စမှာ၊ ဗိုင်းရပ်စ်စက်ဖြစ်နိုင်သည့် virtual machine တစ်ခု။
သင်၏ hypervisor သို့မဟုတ် virtualization team ကဖန်တီးသော VM တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးသင့်အားသင့်လက်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီ Discovery နှင့်အတူထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်လုံးဝအလိုအလျောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသုံးပြီးကြောင်းပေးနိုငျတယျ။
ကျနော်တို့ကတူသင်သည်အဘယ်သို့ပြသနိုင်ဖို့ဒီကို manual ပဲတစ်နည်းနည်းကိုပြု၏။ သို့သော်ထိုသို့ဖြန့်ကျက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဆုံးသတ်ထားသည်။ ပြီးတော့နောက်ဆောင်းပါးမှာတွေ့မယ်။